मेघा घिमिरेलाई भेट्न घरमै गए- प्रदिप खड्का । मेघाले खुशी हुँदै भनिन्- आई लभ यु प्रदिप ! (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > मेघा घिमिरेलाई भेट्न घरमै गए- प्रदिप खड्का । मेघाले खुशी हुँदै भनिन्- आई लभ यु प्रदिप ! (भिडियो हेर्नुस)
admin February 20, 2019 समाचार 0
काठमाडौं- (शिशिर भण्डारी) कृष्ण वलिले बिराज भट्ट भेट्ने चाहना व्यक्त गर्नुभयो अनि समय मिलाएर भेटाए । मेघा घिमिरे बहिनीको मनपर्ने हिरो प्रदिप खड्कासँग भेट्ने रहर पनि आज पुरा गरेको छु । मेघाले प्रदिपलाई भेटेपछि निकै खुशी भईन्..गीत गाईन्, डाईलग सुनिन् अनि आई लभ यु भनिन् । प्रदिपसँगै नायिका जसिता गुरुङ, निर्माता गोबिन्द शाही र व्याकराउण्ड स्कोरर एलिश कार्की पनि मेघालाई भेट्न जानु भएको थियो ।
अझै राम्रो कुरा त हामीले सहयोगी हातहरुबाट प्राप्त ३ लाख ४ हजार २ सय ३५ रुपैंया बुझाई राख्दा प्रदिपको चलचित्र लभ स्टेशन टिमले मेघालाई १ लाख सहयोग थप दिनुभयो । मेघाले प्रदिप खड्का घरमा आउने भएपछि हिजो मात्रै सपनामा प्रदिपलाई देखेको बताईन् । आफ्नो दुर्घटना कसरी भयो सबै सुनाईन् । प्रदिप र जसिताले मेघाको आमाको निकै तारिफ गरे अनि मेघाको साहसको पनि ।
मैले नायिका जसितालाई सोधेको थिएँ । के मेघाको जीवनमा आधारित कुनै चलचित्र बने, तपाई त्यसमा मेघाको भुमिका निभाउनु हुन्छ ? उनले के भनिन्, भिडियो हेर्नुस
ज्योति मगरले पशुपति शर्मालाई यस्तो भनेपछी सबै परे चकित – पुरा हेर्नुहोस
मलामी बसमा सवार ७ जनाको घट’नास्थलमै गरि ८ जनाको निधनले सारा गाउँ नै शोकमा (भिडियो सहित)
च’कित बनाउने खबर : बाख्रोलाई ब’चाउन बा’घसँग यसरि भि’डिन् यी युवती- पुरा हेर्नुहोस
लकडाउनको बेला भारतीय नागरिक सिधै आए काठमाडौं भन्छन् कंलकी सम्म आइपुगिन्छ (भिडियो हेर्नुहोस्)